जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधयेक संसद्मा ‘टेबल’ | Mechikali Daily
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधयेक संसद्मा ‘टेबल’
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०४:३४
बुटवल, । प्रदेश नम्बर पाँचका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधयेक बिहीबार संसद्मा पेश भएको छ । विधयेकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसद्मा ‘टेबल’ गरेका हुन् । उक्त विधयेक लामो समयदेखि रोकिएको थियो । उक्त विधयेकमाथि बिहीबारदेखि नै सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको छ ।
संसद सचिवालका सचिव डा. मानबहादुर विकेले उक्त विधयेक संशोधन प्रस्तावका लागि लागि ७२ घण्टाको समय रहेको जानकारी दिए । उक्त विधयेकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा बिहीबारको बैठकमा सांसदहरु कमला विक, कृष्णा केसी, चेतनारायण आचार्य, दीपेन्द्र अधिकारी, रमा अर्याल, सन्तोष पाण्डे र सुरेन्द्र हमालले भाग लिएका थिए ।
कति छ तलब प्रस्ताव ?
विधेयकमा सबैभन्दा धेरै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको तलब प्रस्ताव गरिएको छ । जिसस प्रमुखको ४१ हजार र उपप्रमुखको ३६ हजार रूपैयाँ मासिक तलबको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश नम्बर ५ मा महानगरपालिका छैन ।
त्यस्तै उप–महानगरपालिका प्रमुखका लागि ४०, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ र उपप्रमुखका लागि लागि ३० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३० र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार मासिक तलब तोक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै उप–महानगरपालिका वडाध्यक्षका लागि ३०, नगरपालिका वडाध्यक्षका लागि २५ र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैंयाँ मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई तलब नभई बैठक भत्ता मात्र पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिसस, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र कार्यपालिका सदस्यले १ हजार ६ सय पाउने छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विदेश भ्रमण भत्ता १ सय २५ देखि १ सय ७५ अमेरिकी डलर दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र विदेश भ्रमणमा यात्रा बिमा सुविधासमेत उपलब्ध हुनेछ । सदस्यलाई बैठक भत्ता र यातायात सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह छन् ।
बिहीबारको संसद् बैठकले ४ वटा समिति पनि गठन गरेको छ । विधान समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समिति र अर्थ तथा विकास समिति गठन भएका हुन् ।
संसद्मा बोल्दै सांसदहरुले प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिनु पर्ने बताएका छन् । बैठकको शून्य समयमा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभाका सदस्यको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा परिपक्व ‘होमवर्क’ गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै सांसद जाल्पा भुसालले प्रदेशको नामकरण गर्न माग गरिन् ।
सांसद पुष्पा थरुनीले थारु समुदायमा देखिएको रक्तअल्पतासम्बन्धी ‘सिकल्ससेल एनिमिया’ नामक रोगको निदान गरी न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले कृषकलाई सहज ढंगले बीउबिजन र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
सांसद दीपा विकले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले सदस्यले अहिलेसम्म प्रतीक चिह्नसमेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
बैठकको विशेष समयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमानुसार खर्चको व्यवस्था हुनुपर्ने भएकाले एक साताभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘अब आउने बजेटले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने विषयमा अध्ययन आरम्भ गरिने छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभई तीन तहका लागि नै स्रोतको निर्धारण नहुने बताए । उनले कानुन निर्माणको विषय प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिए ।